Etu ị ga - esi ahọrọ ọkachamara n’ahịa ịre ahịa Email
Kpụrụ Ntuziaka 8 Idozi Ọkachamara Marketingzụ ahịa Email
Fraịde, Jenụwarị 29, 2010 Sunday, October 4, 2015 Scott Hardigree
Na akụkụ otu (M nwere ike ịchọ ọkachamara n'ịntanetị Email Ọ bụrụ na…) anyị tụlere mgbe na ihe kpatara na ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịme nkwekọrịta na ndị ọkachamara nwere, raara onwe ha nye, ozi ahịa email. Ugbu a, anyị ga-edepụta ụkpụrụ nduzi ị ga-atụle tupu i go ego ọrụ email ahịa gị n'ụlọnga, onye na-ahụ maka ịre ahịa email ma ọ bụ onye njikwa ụlọ ọrụ email. N'ihi gịnị?
Ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ na-eme nhọrọ ha dabere na njirisi na-ezighi ezi, nke na-akpata obi mgbawa, arụghị ọrụ, na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nrụpụta na dollar efu.
Ihe ise Ikwesighi Ime
Edochila ọchụchọ gị na mbara ala. Ee, ụzọ kachasị baa uru iji wulite ntụkwasị obi bụ na mmekọrịta ihu na ihu, mana nke a apụtaghị na enweghị ike wulite ntụkwasị obi n'ụsọ osimiri dị iche iche ma ọ bụ kọntinenti maka nke ahụ. Buru n’uche na ihe ị na-achọ bụ nke dabara adaba. Machibido ọchụchọ gị site na mbido gaa na mpaghara mpaghara akọwapụtara na-amachi oke. Site na mmefu ego ahia gi na ROI n’ihe egwu, nsogbu ahu dikwa elu. Na ụbọchị email na WebEx a, nkwukọrịta dị mfe na ozugbo. N'ezie, mgbe anyị na ndị ahịa anyị zutere n'onwe anyị (ma ha chọrọ ad hoc ma ọ bụ ọrụ jikwaa ha nke ọma), nzukọ na-elekwasị anya ma na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na anyị emeela atụmatụ ha tupu oge eruo.
Emela ka ndị ọkachamara nyochaa dabere na nha. Ọ bụrụ na ị bụ obere ụlọ ọrụ, ị kwesịrị ị na-achị si na-arụ ọrụ a egbe-maka-iku naanị n'ihi na ha na-enye ndị ọzọ ọrụ na-enwe ihe ahụmahụ karịa gị mkpa; ijide n'aka, ị nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu ụlọ ọrụ bara uru maka ha mana ikekwe ha nwere ezigbo ọrụ ịchọrọ.
N'otu aka ahụ, ndị ahịa buru ibu ekwesịghị ịhapụ ndị obere ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọkachamara nọọrọ onwe ha ka ha chee echiche. Ndị nwere ọgụgụ isi na isi nke obere ụlọ ahịa nwere ike ịnwe ahụmịhe karịa ọkachamara ọkachamara n'ịntanetị ma ọ bụ ndị ọrụ etiti etiti a ga-ekenye gị na nnukwu ụlọ ọrụ na-elekọta ọrụ. Ọ bụ nlebara anya, nka, na echiche dị mkpa.
Emela ka ụlọ ọrụ nweta ahụmịhe kwesịrị inwe. Ahịa ahịa nwere ọtụtụ ahụmịhe ụdị nwere ike ịdabere na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ -eche. Onweghi otu ma ọ bụ otu onye ga-ama ihe ị maara banyere ụlọ ọrụ gị, yabụ ị ga-ewe ha n'ọrụ maka ihe ha maara: nka na sayensị nke ịre ahịa email.
Otu n'ime ihe ndị m hụrụ n'anya banyere ịnọ n'ahịa email bụ ntụpọ-echiche nke echiche ndị enwetara site na ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Industrylọ ọrụ ọ bụla pụrụ iche, mana ha niile nwere otu njiri mara. Ọtụtụ mgbe ihe anyị na-amụta ijere onye ahịa ozi n'otu ụlọ ọrụ na-ebute echiche ọhụrụ maka onye ahịa na nke ọzọ.
Ajula (ma obu iju) oru ntule. Mgbasa ozi ma ọ bụ ule dị iche iche bụ nsogbu nke azụmaahịa ụlọ ọrụ, otu ahụ metụtara ndị na-echekwa email. Spec mkpọsa dị ka steroid, ha na-overinflate na ugbu a? ikike. Ma nnukwu ihe mere ghara ịjụ n'ihi na spec ọrụ bụ na ihe kasị mma na-atụ anya – ndị ị chọrọ n'ezie – agaghị eme ya. Ha ekwesighi. Ka ha na-adị njikere ịwụli gị, ị ga-enyo enyo karịa. Ọ bụrụ na ha dị njikere ịhapụ ọrụ ha, ọ gaghị enwe ezigbo ahịa maka ya.
Ezerela ajụjụ gbasara mmefu ego gị. Ekwela ka onye ọ bụla gwa gị na ego (ma ọ bụ mmefu ego) anaghị ekwu okwu. Agencylọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ndị na-esite n’èzí nwere ụfọdụ ihe mmefu ego nke ndị ahịa, rutere site na ahụmịhe ma buru amụma na akụ na ụba yana ndị ahịa ha ugbu a. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa, maka ịme nyocha nyocha, na ị nwere ụfọdụ echiche nke ihe mmefu ego gị bụ ma ọ bụ kwesịrị ịdị. Ma eleghị anya, ị nwere ahụmahụ na-adịghị mma site n'ịkọwapụta mmefu ego gị n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ ihe ị chere na ọ bụ n'ihu ọha (cheta weebụsaịtị mbụ ị mepụtara?) Ọ na-eme. Mana dị ka iwu zuru oke, mgbe ị na-ekwu okwu na atụmanya nwere mmasị, tinye aka na mkparịta ụka na-emeghe mgbe a bịara n'ego gị. N’ikpeazụ ọ ga-azọpụta gị oge, ume, na ego.
Yabụ kedu ka ị ga-esi họrọ onye ịre ahịa email?
Kpebie ihe ị chọrọ. Ihe kacha njọ ị nwere ike ime bụ ịkpọta otu ọrụ ma hapụzie ha ka ha mee ya. Chọrọ onye ga-edu gị ma ọ bụ onye ị ga-eso? Firmlọ ọrụ nwere ike ịmepụta atụmatụ ma ọ bụ ọkachamara na-egbu egbu? Onye ndụmọdụ nke nwere mmasị na ntụrụndụ ma ọ bụ nke ọ bụla bụ azụmaahịa? Onye were gị n'ọrụ ịnara iwu ma ọ bụ onye ga-ama echiche gị aka?
Bido mkparịta ụka. Ziga atụmanya e-mail, ma ọ bụ kpọọ ha. Wepụta nkeji ole na ole na ekwentị ọnụ, ị ga-enweta mmetụta nke kemịkal na mmasị ozugbo. Jụọ ha banyere akụkọ ihe mere eme ha, ndị ndị ahịa ha ugbu a bụ, ihe bụ isi ha.
Kpọọ ha ka ha lelee ọtụtụ ọmụmụ ihe. Buru n'uche na ị naghị achọ ịhụ ma ọ bụrụ na ha nwere ezigbo nsonaazụ ị ga-akọrọ (ha niile ga-eme ya) kama ịghọta echiche dị n'otú ha si rute azịza ha. ? Ga - amụta maka usoro ha, ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ, na otu o nwere ike isi kwekọọ na ụlọ ọrụ gị na ọdịbendị gị. Ọ dị usoro? N'ike mmụọ nsọ dabeere? Data chụpụrụ?
Mgbe ịchọtara ihe dị mma, soro ha kwurịta ụzọ kachasị mma iji hụ na mmekọrịta dị mma na nke ọma. Bịanụ ikpochapụ nkwekọrịta na atụmanya gị maka ịkwụ ụgwọ na ọrụ. Mgbe ahụ gbaa egbe Starter ma hapụ ha ka ha rụọ ọrụ.
Tags: ụlọ ọrụWordPress
Ndị na-achọ Ọchụchọ Injin Ọchụchọ
dị nnọọ Dance